Khabiirka Cilmi-baarista ayaa sharraxaya sida loo xareeyo Website-ka quruxda quruxda badan leh
Waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan dhinaca kale HTML. Mashiinka kombiyuutarka, bogga internetka kaliya waa isku dar ah calaamadaha, astaamaha qoraalka, iyo booska cad. Waxyaabaha dhabta ah ee aan tagno si aan u helno bogga internetka ayaa kaliya ku qeexan habka loo akhrisan karo. Kumbuyuutar ayaa qeexaya waxyaabaha astaamaha ah ee loo yaqaan 'HTML tags'. Qodobka ka soo horjeeda koodhka ceeriin ee xogta aan aragno waa software, kiiskan, daalacayaasheena. Website-yada kale sida jarjarayaasha ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan fikraddan si ay u xoqaan bogga internetka oo ay u kaydiyaan isticmaalka dambe.
Luqad saafi ah, haddii aad fureyso dukumiintiga HTML ama faylka kheyraadka ee bogga gaarka ah, waxaa suurtogal ah in dib loo helo mawduuca ku jira boggaas gaarka ah. Macluumaadkani wuxuu ku jiri doonaa dhul dabaqyo badan oo leh lambaro badan. Nidaamka oo dhan wuxuu ku lug leeyahay wax ka qabashada mawduuca hab aan nidaamsaneyn. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtogal ah in ay awoodaan in ay abaabulaan macluumaadkaan qaab habeysan oo ay dib ugu soo celiyaan qaybo waxtar leh oo laga helo koodhka oo idil.
Xaaladaha intooda badan, xoqxaduhu ma qabanayaan waxqabadkooda si ay u gaaraan halbeegyo HTML ah. Inta badan waxaa jira gunno dhammaad ah oo qof walba isku dayo inuu gaaro. Tusaale ahaan, dadka samaynaya waxqabadyada suuq-geynta internetka ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay ku daraan xarfo gaar ah sida command-f si ay u helaan macluumaadka bogga internetka. Si aad u dhamaystirto hawshan boggag badan, waxaad u baahan kartaa gargaar iyo ma aha oo kaliya awoodaha aadanaha. Sawirada boggu waa kuwan xitaa kuwaas oo xoqin kara websaydh oo leh in ka badan hal malyan oo bog ah saacadaha. Nidaamka oo dhan wuxuu u baahan yahay hab sahlan ee barnaamijka. Qaar ka mid ah luuqadaha barnaamijka sida Python, dadka isticmaala waxay calaamadin karaan qaar ka mid ah xayawaanka kuwaas oo xoqin kara xogta website-ka waxayna ku daadinayaan meel gaar ah.
Xayeysiintu waxay noqon kartaa nidaam khatar ah oo loogu talagalay bogagga internetka. Waxaa jira waxyaabo badan oo walaac ah oo soo noqnoqonaya oo ku saabsan sharciga sharci ahaanshaha. Marka hore, dadka qaarkood waxay tixgeliyaan xogahooda gaarka ah oo qarsoodi ah. Hawlgalkan waxaa loola jeedaa in arimaha xuquuqda lahaanshaha, iyo sidoo kale daadinta waxyaabo gaar ah, laga yaabo inay dhacdo haddii ay dhacdo xoqitaan. Xaaladaha qaarkood, dadku waxay soo dejiyaan website-ka oo dhan si aad u isticmaasho goobaha shaqada. Tusaale ahaan, waqtigii dhowaa, waxaa jiray kiis Craigslist ah oo loogu talagalay shabakad la yiraahdo 3Taps. Boggani waxa uu ka jaray bogga internetka iyo dib u dejinta liiska guryaha ee qaybaha kala duwan. Kadibna waxay degeen 3TAP oo ay bixiyaan $ 1,000,000 guriyahooda hore.
BS waa qalab loo yaqaan (Python Language) sida moduleka ama xirmo. Waxaad isticmaali kartaa Quruxda quruxda badan si aad u xoqdo bog internet ah bogaga macluumaadka ee shabakadda. Waa suurtogal in la xoqo goobta oo xogta ku hesho qaab qaabaysan oo ku habboon soo saarkaaga. Waxaad kala saari kartaa URL ka dibna samee qaab gaar ah oo ay ku jiraan habka dhoofka. BS, waxaad ku dhoofi kartaa noocyo kala duwan sida XML. Si aad u bilawdid, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto qaab-sax ah BS-ga oo ka bilaw asal yaraha Python. Aqoonta barnaamijka ayaa muhiim ah halkan Source .